Kitra – «Amboaran’ny kaonfederasiona»: resin’ny TS Galaxy, 1 no ho 0, ny Cnaps Sport | NewsMada
Kitra – «Amboaran’ny kaonfederasiona»: resin’ny TS Galaxy, 1 no ho 0, ny Cnaps Sport
Lavon’ny TS Galaxy, tompon’ny amboaran’i Afrika Atsimo, tamin’ny isa tokana, 1 no ho 0, ny Cnaps Sport Itasy, teo amin’ny lalao ampaha-1/32 –n-dalana, hiadiana ny amboaran’ny kaonfederasiona. Fihaonana notanterahina, omaly alahady tao amin’ny kianja Mbombela Stadium, tao Durban.
Baolina tokana, tafiditry ny mpampiantrano, teo amin’ny minitra fahadimy nilalaovana. Nahafaty io baolina io i Sanele Barns, raha somary mbola nihafihafy ny ekipa malagasy. Taorian’io, nifandimbiasana ny fanafihana. Nanao izay ho afany ry Lalaina sy ny namany, teo amin’ny famonoam-baolina, saingy ratsy fiafara hatrany izany. Naneho ny fahaiza-manaony ihany koa ry Toby sy ry Ando, teo amin’ny fiarovantena, izay tsy namela ireo lohalaharana afrikanina tatsimo handingana mihitsy.
Nisy fotoana tokony hahatafiditra baolina ny Cnaps Sport, saingy tratry ny fikoropahana loatra ireo lohalaharany ka very an-javony izany, rehefa tonga ao anaty faritra tsy azo ivalozana.
Tsara ny rindran-dalaon’ny Cnaps Sport tamin’ny ankapobeny, saingy lesoka io famonoam-baolina io. Mbola afaka manarina tsara ny ekipa malagasy, amin’ny lalao miverina, izay tombony ho azy ireo satria hilalao eo amin’ny kianja mahazatra azy ny Cnaps Sport.